ရစ်မျိုးရင်းဝင်ငှက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: Oligocene ခေတ်-လက်ရှိခေတ်၊ 30–0 Ma
(ပ)တန်း - (တောင်ခါငှက်များ)။ ။ အမောက်ပါတောင်ခါ၊ red-billed partridge၊ တောင်ခါနီ။
(ဒု)တန်း - (ဒေါင်းမျိုးတူငှက်များ)။ ။ တောကြက်, အိန္ဒိယဒေါင်း, harlequin quail;
(တ)တန်း - (ရစ်ငှက်များ)။ ။ ရစ်ငှက်, ကြက်ဆင်, western capercaillie.
ရစ်မျိုးရင်းဝင်ငှက်များ (Phasianidae) သည် ရစ်များ၊ ခါများ၊ တောကြက်များ၊ အိမ်မွေးကြက်များ၊ ကြက်ဆင်များ၊ ငုံး(ကမ္ဘာဟောင်း)၊ နှင့် ဒေါင်းများ ပါဝင်သော မြေပြင်ပေါ်တွင်နေထိုင်သည့် အလေးချိန်စီးသော ၎င်းငှက်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် မျိုးရင်းအဆင့်ရှိ အမည်နာမဖြစ်သည်။ ဤမျိုးရင်း တွင် ငှက်တိုက်၊ ကြက်တိုက်ခြင်းမျိုးတွင် လူကြိုက်များသော ငှက်မျိုး အများအပြားပါဝင်သည်။
မျိုးရင်းဝင် ငှက်မျိုးစုအရေအတွက်သည် များပြားလှပြီး ယခင်က မျိုးရင်းအဆင့် အုပ်စုနှစ်ခုအဖြစ် ရစ်၊ ဒေါင်းနှင့် ကြက်များပါဝင်သော ရစ်ငှက် (Phasianinae) နှင့် ခါနှင့် ငုံး(ကမ္ဘာဟောင်း)များပါဝင်သော (Perdicinae) ဟူ၍ အုပ်စုခွဲနှစ်ခုခွဲခဲ့သည်။ သို့သော် ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် မကြာသေးမီက သိပ္ပံနည်းကျဆန်းစစ်မှု အထောက်အထားများတွင် မျိုးရိုးဗီဇတူများ အကုန် မပါဝင်သော မူမမှန်သည့် မျိုးတူစုဖွဲ့မှု (Paraphyletic) သာ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ထိုကြောင့် ယင်းဆန်းစစ်မှုရလဒ်အရ ရစ်မျိုးရင်း အောက်တွင် မျိုးရင်းခွဲ (ခေါ်) မျိုးရင်းသေး (Subfamily) များအဖြစ်
တောင်ခါနှင့် မျိုးရိုးတူ ငှက်များ (Rollulinae)၊
ရစ်နှင့် မျိုးရိုးတူ ငှက်များ (Phasianinae)၊
ဒေါင်းနှင့် မျိုးရိုးတူ ငှက်များ (Pavoninae)
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလများအထိ မျိုးရင်း၏ အောက်တွင် မျိုးရင်းခွဲနှစ်ခုအဖြစ်- ရစ်ငှက်များအပါအဝင် တောကြက်များ(အိမ်ကြက် အပါအဝင်)၊ ဒေါင်းများကို စုဖွဲ့၍ မျိုးရင်းခွဲ 'Phasianinae'  နှင့် ခါငှက်များ၊ ငုံး(ကမ္ဘာဟောင်း) များကို စုဖွဲ့၍ မျိုးရင်းခွဲ 'Perdicinae' ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယင်းခွဲခြမ်းမှုသည် မှားယွင်းနေကာ ဒေါင်း၊ ကြက်များသည် ရစ်ငှက်များထက် ခါ နှင့် ငုံး(ကမ္ဘာဟောင်း) များနှင့် ပိုမိုအမျိုးရိုးနီးစပ်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။   
အောက်ပါအတိုင်း မျိုးရင်းခွဲ (၃) ခုဖြင့် ခွဲခြားထားသည် -
မျိုးရင်းခွဲ ။ Rollulinae (တောင်ခါငှက်များ)
မျိုးစု။ Xenoperdix Dinesen et al. 1994 (forest partridges)
မျိုးစု။ Caloperdix Blyth 1861 (တောင်ခါနီ)
မျိုးစု။ Rollulus Bonnaterre 1791 (အမောက်ပါတောင်ခါ)
မျိုးစု။ Melanoperdix Jerdon 1864 (black partridge)
မျိုးစု။ Arborophila Hodgson 1837 (hill partridges)
မျိုးရင်းခွဲ ။ Phasianinae (ရစ်နှင့် မျိုးရိုးတူ ငှက်များ)
မျိုးနွယ်စု။ Lerwini - (နှင်းခါငှက်)
မျိုးစု။ Lerwa - (နှင်းခါငှက်) (မျိုးနွယ်စုအောက်တွင် မျိုးစု ၁ ခုသာရှိသည်။)
မျိုးနွယ်စု။ Ithaginini - (ရစ်နီ)
မျိုးစု။ Ithaginis - (ရစ်နီ) (မျိုးနွယ်စုအောက်တွင် မျိုးစု ၁ ခုသာရှိသည်။)
မျိုးစု။ Tragopan - (ဇာမဏီ)
မျိုးစု။ Tetraophasis - (မိုးနဲရစ်)
မျိုးစု။ Lophophorus - (မိုနဲ ၊ အမောက်ရှည်မိုနဲ)
မျိုးစု။ Pucrasia - (koklass pheasant)
မျိုးစု။ Meleagris - (ကြက်ဆင်)
မျိုးစု။ Bonasa Stephens 1819 (ruffed grouse)
မျိုးစု။ Tetrastes Keyserling & Blasius 1840 (hazel grouse)
မျိုးစု။ Centrocercus Swainson 1832 (sage-grouse)
မျိုးစု။ Dendragapus Elliot 1864 (blue grouse)
မျိုးစု။ Tympanuchus Gloger 1841 (prairie-chickens and sharp-tailed grouse)
မျိုးစု။ Lagopus Brisson 1760 (ptarmigans)
မျိုးစု။ Falcipennis Elliot 1864 (Siberian grouse)
မျိုးစု။ Canachites Stejneger, 1885 (spruce grouse)
မျိုးစု။ Tetrao Linnaeus 1758 (capercaillies)
မျိုးစု။ Lyrurus Swainson 1832 (black grouse)
မျိုးစု။ Rhizothera - (နှုတ်သီးရှည် တောင်ခါ)
မျိုးနွယ်စု။ Phasianini - (ရစ်မျိုး)
မျိုးစု။ Perdix - (true partridges)
မျိုးစု။ Syrmaticus - (ရစ်မြီးရှည်)
မျိုးစု။ Chrysolophus - (ruffed pheasants)
မျိုးစု။ Phasianus -(ရစ်ငှက်)
မျိုးစု။ Catreus - (cheer pheasant)
မျိုးစု။ Crossoptilon - (eared pheasants)
မျိုးစု။ Lophura - (မြန်မာငွေရောင်ရစ်)
မျိုးရင်းခွဲ ။ Pavoninae - (ဒေါင်း/တောကြက်/ငုံး)
မျိုးနွယ်စု။ Pavonini - (ဒေါင်းမျိုးနွယ်)
မျိုးစု။ Rheinardia - (crested arguses)
မျိုးစု။ Argusianus - (မင်းဒေါင်း)
မျိုးစု။ Afropavo - (African peafowl)
မျိုးစု။ Pavo - (ဥဒေါင်း၊ အိန္ဒိယဒေါင်း)
မျိုးစု။ Tropicoperdix - (တောင်ခါလည်ပြောက်)
မျိုးနွယ်စု။ Polyplectronini (ဒေါင်းမင်းမျိုးနွယ်စု)
မျိုးစု။ Haematortyx Sharpe 1879 (crimson-headed partridge)
မျိုးစု။ Galloperdix Blyth 1845 (Indian spurfowls)
မျိုးစု။ Polyplectron Temminck 1807 (ဒေါင်းမင်း)
မျိုးနွယ်စု။ Gallini (ကြက်မျိုးနွယ်စု)
မျိုးစု။ Bambusicola Gould 1863 (bamboo partridges)
မျိုးစု။ Gallus Brisson 1760 (တောကြက်၊ အိမ်ကြက်)
မျိုးစု။ Peliperdix Bonaparte 1856 (Latham's francolin)
မျိုးစု။ Ortygornis Reichenbach, 1852
မျိုးစု။ Francolinus Stephens 1819
မျိုးစု။ Campocolinus Crowe et al 2020
မျိုးစု။ Scleroptila Blyth 1852
မျိုးနွယ်စု။ Coturnicini (ငုံးမျိုးနွယ်စု)
မျိုးစု။ Tetraogallus Gray 1832 (snowcocks)
မျိုးစု။ Ammoperdix Gould 1851 (see-see and sand partridges)
မျိုးစု။ Synoicus Bosc 1792
မျိုးစု။ Margaroperdix Reichenbach 1853
မျိုးစု။ Coturnix Garsault 1764 (typical Old World quails)
မျိုးစု။ Alectoris Kaup 1829 (rock partridges)
မျိုးစု။ Perdicula Hodgson 1837 (bush-quails)
မျိုးစု။ Ophrysia Bonaparte 1856 (Himalayan quail)
မျိုးစု။ Pternistis Wagler 1832 (partridge-francolins; African spurfowls)
↑ McGowan၊ P. J. K. (1994)။ "Family Phasianidae (Pheasants and Partridges)"။ in del Hoyo၊ J.; Elliot၊ A.; Sargatal၊ J. (eds.)။ New World Vultures to Guineafowl။ Handbook of the Birds of the World။ 2။ Barcelona, Spain: Lynx Edicions။ pp. 434–479။ ISBN 84-87334-15-6။
↑ ၂.၀ ၂.၁ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယား၏ List of Galliformes စာရင်း ဆောင်းပါးမှ "Family Phasianidae Horsfield, 1821" စာပိုဒ်အား ကောက်နှုတ်ထားသည်။ (၂၈-၁၀-၂၀၂၁)
↑ Johnsgard၊ P. A. (1986)။ The Pheasants of the World။ Oxford, UK: Oxford University Press။
↑ Johnsgard၊ P. A. (1988)။ The Quails, Partridges, and Francolins of the World။ Oxford, UK: Oxford University Press။
↑ "A molecular phylogeny of the pheasants and partridges suggests that these lineages are not monophyletic" (1999).
↑ "Does more sequence data improve estimates of galliform phylogeny? Analyses ofarapid radiation usingacomplete data matrix" (2014).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရစ်မျိုးရင်းဝင်ငှက်များ&oldid=712707" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။